Callcenter Kuzviuraya | Martech Zone
Chipiri, January 15, 2008 Muvhuro, July 11, 2016 Douglas Karr
NeMugovera, takashanda necall center uye mumwe wevatengi vedu. Ndakanga ndine fuzzy iyoyo, ura kunzwa kuti kwaisazoenda zvakanaka. Ura hwangu hwainge hwakarurama.
Ipo isu pataive nebasa redu rakakwana uye zviwanikwa zvakagara zvisina basa kwemwedzi, iyo yekufona haina kubata chero chinhu. Isu tanga tine demo uye chete mugadziri wavo ndiye akaonekwa. Mutengi akadana callcenter akabvunza zvaidiwa kuti agadzirire. Takasheedza ku callcenter kuti tione kana vaive vakagadzirira. Nguva yega yega vashandi vepa callcenter vaitivimbisa kuti vaingoda mavhiki mashoma.
Paunopihwa zvese nguva nezviwanikwa, zvitore.
Mazuva mashoma vasati vaenda kunorarama, ivo vaida shanduko mukushandisa iyo yataifanira kurovera mukugadzirwa. Rimwe zuva tisati taenda kunogara, ivo vakaedza uye isu takawana nyaya ne slam. Takazvigadzirisa mukati memasikati.
Mune maziso edu mutengi, hongu, mativi maviri aive akapindirana. Iyo yekutanga yaive yavo yekufona nzvimbo + software yedu. NeMugovera takatangisa mazuva mashoma kunonoka - apa ndipo pakatanga mafaro chaiwo. Pakarepo mhinduro pane iyo nzvimbo yaive isina hunhu, isina basa uye inononoka - kubva kune vatengi, kwete isu.
Isu takabva tangodaidza mimwe misangano yekukwirisa nekambani uye tsvina yakatanga kubhururuka. Mwedzi iyo yakadzungaira mushure mekukumbira mushure mekukumbira kwekuvandudzwa haina kufuratirwa, uye tarisiro kubva kunzvimbo yekufona yaive yekuti modhi yemari haina kushanda. Vanga vachichaja $ x / kufona - asi sezvo kufona kwacho kwakatora nguva yakareba, vaizorasikirwa nemari. Ivo vainyepedzera kusaziva pahuwandu hwakafanotaurwa, vakanyunyuta nezve kuomarara kwekufona, uye vakataura nezve izvo zvisina musoro zvinodiwa nevatengi.
Asi, ivo vakabvumirana kune bhizinesi, vakabvumirana kuripwa uye vakabvumirana kune yakatarwa nguva.
Usanyunyute pashure iwe unoti iwe unogona kuuraya!
Vakafunga kuyedza kukanda zvese pasi pebhazi uye kudzivirira kwavo kusagona. Kwaive kunetsa kugara nefoni kwavakazvipa mhosva pane zvese pasi pezuva. Kunze kwekusatendeseka kuri kuenderera mberi kune dambudziko chairo (kwete kuongorora basa kumberi uye kugadzirira vashandi vavo nemazvo) vakasarudza mugwagwa wakaderera. Zvakaipisisa pane zvese, vakasarudza kuburitsa pachena zvichemo zvavo pashure kutadza, panzvimbo yekutanga kutanga. Kudzivirirwa kwavo kwekupedzisira kwaive nyore, hupfumi hauna kuwedzera. Ivo vanga vasiri kugadzira zvakakwana kuti vabatsirwe kubva kune yega kufona.
Wekufona uyu akaita kunge akanganwa izvozvo mutengo parunhare hachisi icho chinangwa chemutengi, mari parunhare ndiro.
Mhinduro yakajeka, handizvo here? Izvo zvirinani iwe kugadzirira yako mudonzvo, ivo vanonyanya kushanda ivo vanozove vari mukugadzirisa kufona. Izvo zvirinani zvavari kugadzirisa kufona, zvirinani ivo vachasimudzira mutengi, vanomiririra bhizinesi ravari kuita pachinzvimbo chavo, uye zvakanyanya kuti vangangokwanisa kubva panhare nekukurumidza. Kana mafoni acho achitora nguva yakareba, mutengi anogona kunge achida kuibhadhara kana paine mari inowanikwa. Mutengo idambudziko repamoyo, mushonga unowedzera mari.
Takabvunza zvatingaite kuti tibatsire. Imwe kurudziro yaive yekuwedzera kumwe kushanda mukushandisa. Nehurombo, iyo nguva yebudiriro yakanga yapfuura apo chikumbiro chakagara chisina basa.
Nhasi, tadzima nzvimbo yekufonera kuti tipe timu imwe nguva yekudzidzira. Ivo vachiri kuomerera pane imwe mari parunhare. Ivo vanofanirwa kuziva kuti zvingave zvakakosha kuratidza kuti iwe unogona kutanga waita basa usati wakumbira imwe mari. Mutengi ari kuvapa mukana wechipiri, ini handina tariro kuti vachazvishandisa nemazvo.
Tiri kutoshanda pane dzimwe nzira.
Tags: call centrecallcentermari parunhare
Jan 16, 2008 pa 9: 13 AM
Wakaida izvo. Handikwanise kukuudza kangani mamiriro akafanana andakaitika kwandiri. Iwe unoedza uye edza kubatsira, asi pakupedzisira ivo havadi rubatsiro kusvika zvanyanyisa uye zvakapfuura nekuda.
Jan 20, 2008 pa 2: 35 AM
Call Center inodaira zvakanyanya kunyanya kana zvasvika kune tekinoroji. Chirongwa chekushandisa chinongova chimwe chezvinhu zvinodiwa…. :)